१ वर्ष अगाडि / ७३ पटक हेरिएको
वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. दीपक चौरसिया र नेशनल मेडिकल कलेजका डा. मधुरञ्जन सिंहका पक्षबीच कुटाकुट भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त स्टाटस र म्यासेजको विषयलाई लिएर विवाद हात हालाहालसम्म पुगेको थियो । नारायणी अस्पतालका चिकित्सक बस्दै आएको टाउन हल क्वारेन्टाइन स्थलमा सिंह नेतृत्वको टोलीले विवाद गर्न पुगेका थिए । उक्त घटनामा नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. दीपक चौरसिया सामान्य घाइते भएका थिए ।
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघ वीरगञ्जले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना संक्रमणको महामारीसँग लड्न अग्रपंक्तिमा रही व्यस्त रहेको समयमा जुनियर चिकित्सकहरुबीच विवाद गर्नु उचित होइन । त्यसैले दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराइसकेका छौं ।’